Ndị agha mmiri US 4, ndị Afghanistan 60 nwụrụ na mwakpo ọdụ ụgbọ elu Kabul
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ndị agha mmiri US 4, ndị Afghanistan 60 nwụrụ na mwakpo ọdụ ụgbọ elu Kabul
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
MGBE: Ọnụ ọgụgụ ndị US Marines nwụrụ ugbu a na 12
Ọtụtụ ndị mmekọ mba Amerịka akwụsịla mbọ ọpụpụ ha tupu mgbawa nke Tọzdee, na -ekwupụta ọgụgụ isi dị n'ihu banyere mwakpo ndị na -eyi ọha egwu, ma ọ bụ kwupụta Thursday dị ka ohere ikpeazụ ịpụ.
Ndị agha US gburu na Kabul ogbunigwe.
Ọtụtụ ndị nkịtị Afghanistan nwụrụ na mgbawa ọdụ ụgbọ elu Kabul.
Ọtụtụ ndị mmekọ mba Amerịka akwụsịla ịpụ na Kabul.
Ndị agha mmiri US anọ na ọ dịkarịa ala ndị Afghanistan 60 nwụrụ na mwakpo Tọzdee na ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai.
Dị ka akụkọ ọhụrụ si kwuo, onye nnọchi anya US na Kabul gwara ndị ọrụ nnọchi anya ebe ahụ na ndị agha US anọ nwụrụ na mmadụ atọ merụrụ ahụ. ọdụ ụgbọ elu. N'otu oge ahụ onye isi ahụike Afghanistan kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'etiti ndị nkịtị obodo dịkarịa ala 60, ebe ọtụtụ ndị ọzọ na -alụ ọgụ maka ndụ ha.
Ngalaba Nchedo US ekwuputala n'ihu ọha na ọtụtụ ndị agha US so na ndị nwụrụ na mwakpo Thursday na ọdụ ụgbọ elu Kabul na nkwupụta onye ode akwụkwọ mgbasa ozi John Kirby wepụtara.
Agencylọ ọrụ ahụ akọwapụtaghị ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ, na -agbakwụnye na ọtụtụ ndị America merụrụ ahụ.
Ọnwụ ndị a sitere na “mwakpo dị mgbagwoju anya” nke gbukwara ọtụtụ ndị nkịtị Afghanistan, dị ka Pentagon si kwuo. Ihe mgbawa ahụ - nke ekwenyere na ọ sitere n'otu ogbunigwe ogbunigwe n'ọnụ ụzọ Abbey na otu bọmbụ ụgbọ ala n'akụkụ ụlọ nkwari akụ Baron - gburu mmadụ 13, onye na -ekwuchitere ndị Taliban ekwenyela.
Denmark na Canada abụghịzị ndị ọrụ mgbapụ ụgbọ elu; Poland na Netherlands akwụsịla ife efe kemgbe mwakpo ahụ, ebe Italytali kwụsịrị n'abalị Tọzdee, France kwupụtara ụbọchị Fraịde. Agbanyeghị, UK na US na -aga n'ihu na njem ụgbọ elu ha ka puku kwuru puku na -anwa ịkwanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu dị na -ebelata n'ike n'ike.